EGEREE OROMIYAA HAABARAARRU: Raaga Taajjabbii-Obbo Lammaa Magarsaafi Jaal Dawud Ibsaa Ayyaanaatiin naaf gahaa maaloo!!!! – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsEGEREE OROMIYAA HAABARAARRU: Raaga Taajjabbii-Obbo Lammaa Magarsaafi Jaal Dawud Ibsaa Ayyaanaatiin naaf gahaa maaloo!!!!
EGEREE OROMIYAA HAABARAARRU: Raaga #Taajjabbii-Obbo Lammaa Magarsaafi Jaal Dawud Ibsaa Ayyaanaatiin naaf gahaa maaloo!!!!
1. Egereen uummata keenyaa nasodaachiseera. Sodaankoo Oromoofi Oromoo, Oromoofi ollaa keenya (Amaaraafi Tigiree) gidduutti dhibee ka’a jedhee raagaa jirudha. Of eeggannoo akka goonuufan barreessaa jira. Yaaddoonkoo guddaan waraana wal-waliinii (Civil War) biyya sanatti ka’uu mala kan jedhudha. Fakkeenyaaf, Dubbiin du’a Injiner Simmanyew irratti Uummanni Gondar Meeshaa Butatee manaa bahe ragaa gahaadha. Gosasaa keessaa nami took waan miidhameef guyaya tokko magaalaa isaanii dirree waraanaa fakkeessaa oolani. Sun waa nu agarsiisa. Akkasumas dhimma finfinneen Walqabatu bay’inni Ummata Amaraa %55 ol tanee osoo jirruu mana maree bakkabu’aa ummata Finfinnee iyyaffachuun isanii fi Dhiimma Siidaa Annoolee fi Calii Calaanqoo digamuu isaa gafachuun akka salphatti utuu ilaluu bannee garii ta’a (Dhimma kana caalaatti Jawar Siraj tu biyya isaanii dhaqee waliin laaqee gale). Sababi isaa Meeshaa isanii Abdachuu isani xinxaluun nama hin rakkisu jechuufani. Abbaan meeshaa qabu of oolcha, gumaallee baafata. Sabasaallee ni eega. Akkasuumas Nannoo Tigiray ilalchisee Bu’uurri humna Waraana qilleensaa Maqalee jira (Sun hadnhuurri human biyyichaa achi jiraachuusaa ibsa). Raadariin waraanaa biyya eegu 10 Maqalee jira. Humni Addaa Tigiraay kan 45,000 ol ta’u Amerikaa fi Israel leenjisteef yeroo ammaa kana Maqalee jiru. Meeshaan waraanaa ammayyaa fi humna leenji’e gahaa qabu. Barbaachisaadha taanaan humna waraana Itoophiyaa rukuttee harka kennisiisuu ni dandadeessi Tigray. Tigraay 100% hidhannoo guutuu qaba. Amaarri 75% hidhannoo guutuu qaba. Oromoon waggaa 27 meeshaan irraa hiikamaa ture (OPDO fi TPLF Oromoorra waraana hikaa turani. Waraanni sun har’a walitti qabamee Maqalee akka jiru keessa beektonni dubbatu. Poolisiin Oromiyaa kilaashii jabana Haile Sillaase gototaa jiru. Innuu Kaartaa 1 waliin. Leenjiin immoo Sanqallee fi xollay tti.Sunuu leenjii ammayyoome miti. Rakkoo dhufaa jiru jalaa uummanni oromoo akkamitti oolaa? Kan jedhu yoo irratti hojjetame garii natti fakkata. Haaluma Kanaan:
2. Obbo Lammaa Magarsaa, Prezedaantii Oromiyaa, Poolisiin Oromoo siharka jiru. Jaal Dawud Ibsaa, WBO’n siharka jiru. Oromiyaan abdii isheen qabdu kanuma. Biyya keenya oolfachuuf miidiayaan sirbuu qofaan gahaa miti. Leenjii waraanaa cimaa nufeesisa. WBO’n leenjii cimaa akka qabu ifa. Muuxannoofi kutannoonsaa adda. Ta’us leenjii ammayyaa biyya alaa hinqabu. OPDO’n waraana 5 biyya alaatti ergitee nuuf hinleenjifne. Sana TPLF tu dhorka. Jarana salphina keessa jirra. Baayyina qabna malee qophii hinqabnu. Guyyaa hinbeekamnetti waraanni biyya sana keessatti ka’uu mala. Sabni keenya wabii hinqabu. Waraana hinqabnu taanaan biyya hinqabnu. Maaloo, WBO fi Poolisii Oromiyaa, akaksumas human Ittisa Oromiyaa hundaaf leenjii ammayyaa qindeessaa. Baajeta sanaaf ramadaa. Namoota kaanimmoo keessaa filuun leenjii waraana ammayyaaf atattamaan biyya alaati ergaa. Oromoon gatii kanaaf malau nibuufata. Dirqamas nuuf kennaa. Oromoon tokko Qar. 1 yoo guyyaatti buufanne, waraana 20, 000 ol ala kanatti leenjifnee biyya galfachuu dandeenya. Yookaan leenjisaa ala kanaa qacaranii galchuun nidanda’ama. Waraanni haaraanis galmaa’uun amma. Miindaan waraana Oromoo kan eenyuurra caalaa olaanoo ta’uu qaba. Kanaafidha AMarikaan kan addunyaa dhiittee bulchaa jirtu. Kanaf soaatamte. Miindaan hojjetoota biro gadi bu’uu qaba.
Waan baayyee barreessuu utuun danda’uun gabaabse. Obbo Lammaa Magarsaafi Jaal Dawud Ibsaa biraan naaf gahaa!
Hagayya 14, 2018
Abbaa Gaarre says:
Ilaalcha sirri dha. Ormi bitaa fi mirgaa kan qawwee bitatu Oromo irratti duuluuf akka tahe ifaa tahuu qaba. Mootummaan Oromiyaa hardha jirtu, yoo dhuguma Oromof quuqamti tahe, Balaa dhufuuf deemu kana tilmaamtee, nurraa qolachuuf Oromo yaada tokko jalatti gurmeessuu qabdi. Rakkoo isaan Oromootti hanga hardha fidan irra kan dhufuuf deemutu caala.
Maaloo Oromo, Tokko tahaa, waliin hiriiraa.
It is going to be Madda Walaabuu no. 2!